दशैंको टीका कुन दिशामा फर्केर ग्रहण गर्दा मिल्छ शुभ फल ? – Khabaarpati
October 26, 2020 goodmamLeaveaComment on दशैंको टीका कुन दिशामा फर्केर ग्रहण गर्दा मिल्छ शुभ फल ?
काठमाडौं । हिन्दू नेपालीहरुको महान् चाड बडादशैं मान्यजनहरुबाट टीका र आशिर्वाद ग्रहण गरी मनाइँदैछ । घरमा विधिपूर्वक राखिएको जमरा र टीका देवी दूर्गालाई चढाएपछि पूर्ण घडाको जलले अभिषेक गरी आफ्ना मान्यजनहरूबाट नवदूर्गा भवानीको प्रसाद, टीका र जमरा लगाउने प्रचलन छ ।
परिवारमा आफूभन्दा ठूलाबडा, बाजेबज्यै, बाबुआमा, गुरुपुरोहित तथा मान्यजनको हातबाट नवदूर्गा भवानीको प्रसादको रुपमा रातो टीका, जमरा तथा प्रसाद थापी यस, ऐश्वर्य तथा दीर्घायु प्राप्त होस् भनी आशिर्वाद लिने गरिन्छ । कात्तिक १० गते देवी विसर्जनको साइत बिहान १०:११ बजे रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
टीका प्रसाद ग्रहणका लागि साइत खोज्नेका लागि भने १० : १९ बजेको साइत उत्तम छ । विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमामा अखिल बलि पूर्ति नभएसम्म देवीको प्रसाद लगाउने शास्त्रीय विधि छ । अहिले शुक्र दक्षिणतिर भएकाले टीका लगाइदिने मान्छे पूर्वतिर फर्किने र लगाउने मान्छे पश्चिम फर्कन उपयुक्त हुने ज्योतिष हरिप्रसाद भण्डारीले बताएका छन् ।
दैत्यका गुरु शुक्राचार्य भएकाले बिघ्न बाधा नपरोस् भनि शुुक्रलाई पछाडि पारेर टीका लगाउने प्रचलन छ । शुक्राचार्यले दैत्यको पक्षमा काम गर्ने विश्वासले विजयका बेला शुक्राचार्यको वेवास्ता गर्ने प्रचलन रहिआएको हो । यस्तै चन्द्रमालाई सम्मुख वा दाहिने पारेर पनि टीका लगाउदा उपयुक्त मानिन्छ ।
कुर्कुच्चा फुटेर सामन्या सोचेर नबसौ।तुरुन्तै यसरी गर्नुहोस घर मै उपचार
दिनहुँ ८ लिटर दुध दिने दुनियाँकै अनौठो “बोका”
November 18, 2020 Khabar Pati